ntinye brazing carbide n'ọnụ na ngwa isi isi ezé.
ihe ntinye ihe nkedo na-eme ka ihe nkedo na-eme ka elu na nchara nchara
Na nyocha ngwa a, ntinye ihe nkedo na-eme ka ọkpụkpụ na-arụ ọrụ na ezé.
Ngwunye Brazing Ngwunye
DW-UHF-10kw itinye n'ọkwa brazing igwe
Ngwunye ọkụ ọkụ ahaziri ahaziri
• Nchara na-arụ ọrụ isi
• Brazing mado
Ike: 4.5 kW
Oge: 6 sekọnd
A na-etinye mado brazing na ngwaọrụ
Nchara na-arụ ọrụ isi ezé na-agbakwunye.
A na-edebe mgbakọ ahụ na eriri ntụgharị atọ.
Nzukọ ahụ na-ekpo ọkụ.
Emechara nkwonkwo a na sekọnd iri atọ na asatọ.
Nsonaazụ na-agbanwe agbanwe yana dabara adaba maka imepụta nnukwu olu
Itinye n'ọkwa Brazing Carbide Tipping bụ usoro brazing a kapịrị ọnụ site na nke ejiri ihe akụrụngwa siri ike tinye ya na ngwongwo ihe iji mepụta njedebe siri ike. Mgbe ị na-eji kpo oku ọkụ ọkụ, ihe nkedo na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ihe dị elu ruo 1900F.
Categories Technologies Tags brazing carbide ígwè n'ọnụ, brazing carbide n'ọnụ, brazing ígwè carbide n'ọnụ, HF na-atụgharị carbide n'ọnụ, HF brazing nchara carbide, nnukwu brazing ugboro ugboro, elu ugboro brazing carbide n'ọnụ, nkwalite brazing carbide, itinye n'ọkwa brazing carbide n'ọnụ, brazing ígwè ígwè, Ngwunye ígwè na-agba ume Mail igodo